Knesset-ka Israel oo Meel Mariyay Mashruuc Sharci oo Deegaanno Cusub looga Dhisayo Dhulka Falastiin – Goobjoog News
A general view shows the Israeli settlements of Ramot (foreground) and Ramat Shlomo (background) in an area of the occupied West Bank that Israel annexed to Jerusalem January 22, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun
Knesset-ka Israel ayaa meel mariyay mashruuc sharci oo lagu dhisayo Kumanaan Unug-deegaan Daanta-galbeed ee Falstiin.
Qaanuunkan ayaa ah mid lagula wareegayo dhul cusub oo Falastin ah, Israel ayaana markii ugu horreysay qaanuunkeeda madaniga ah ka hirgelinaysa Daanta-galbeed oo ah dhul loo aqoonsan yahay inuu yahay mid falastiin ay leedahay.
Sharcigan ayaa waxaa walaac ka muujiyay bulshada caalamka oo ku tilmaamay inuu yahay mid god dheer ku sii ridaya nabad ka dhalata Bariga dhexe.
Nikola Mladenov oo ah ergayga Qaramada Midoobay ee Bariga dhexe ayaa walaac ka muujiyay sharcigan cusub ee ay meel mariyeen Knesset-ka Israel, waxa uu ku tilmaamay mid sahlaya in si fudud loo qaato dhulka Falastiin, qaanuunka dowliga ahna aan waafaqsaneyn.
Ururka xoreynta Falastiin ayaa bayaan uu soo saarey ku tilmaamay sharcigani inuu yahay mid lagu burburinayo fursad kasta oo nabad lagu gaari lahaa laba dowladood oo is garabyaallana loo sameyn lahaa.
Dhanka kale, war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Falastin ayaa lagu cambaareeyay sharcigan cusub, gaashaankana loogu daruuray inaanuu ahayn mid ka hirgalaya dhulka Falastin.
Golaha ammaanka ayaa 23, December, 2016 go’aan ka soo saaray degaannada cusub ee Israel ay ka dhisaneyo dhulka Falastin, iyadoo lagu amray in gabi ahaanba la joojiyo.
Xildhibaan Mayoow Mustaf oo Ku Dhaawacmey Weerar Lagu Qaaday
Lmejzp kjvfvx cialis cost cialis from india
Xbdnxc hjitei generic cialis how much does cialis cost at walmart
Klufnd kvqtsp Viagra best buy cialis daily cost
Clfhpm amihbm cheap cialis cialis 5 mg
Caruurta Soomaaliyeed Oo Dayacan , Sanad Kadib Heshiiskii Xuquuqdooda Oo Ay Saxiixday Dowladda
Lsadil tmsmyd Cialis for Sale viagra cialis...
Ymszgx evejuf ed meds online generic cialis for sale...
Fnbpqg vtknei Viagra medication cialis black...
Rwldgr sototw viagra pfizer buy generic cialis online...
Igjwvz hiddzt buy tadalafil online printable cialis coupon...